Iko pfupa china tafura tafura yakajeka kwazvo kubata?
Britain yakagadzira bone china tafura yemakumi masere emakore. Mushure mekuvandudzwa kwakawanda kwepasirese, yakave imwe yemhando dzakasiyana dzevhu dzevhu. Bone china tafura yemahara hapana mubvunzo kuti inokodzera kushongedza tafura yemuchato, nekuti mapfupa akaomarara uye akatsetseka magadzirirwo, akaenzana ...
Ndeipi iri nani, chena porcelain kana nyowani pfupa porcelain, rega nditaure?
Porcelain tableware ndiyo yakanyanya kuwanda tafura mune yemazuva ese tafura. Zvinoenderana nemidziyo, porcelain tafura yakakamurwa kuita chena porcelain tafura, bone porcelain tafura, uye shell porcelain tafura. Pakati pavo, bone china tafura inonyanyo kufarirwa. Bhonzo china raive rakatangira ...
Ndeupi musiyano uripo pakati pekeramiki uye bone china?
1. Kuchengetedzwa kwe ceramics 1. Imba sipo inogona kushandiswa pakuchenesa zuva nezuva. 2. Wedzera amoniya shoma nesipo kana shandisa musanganiswa weiyo yakaenzana yelinseed uye turpentine kutanga, iyo inozove nekusimba kwakanyanya uye inogona kuita kuti mataira apenye. 3. Kana ukateura yakasimba kudaya mvura ...